Spark Plugs ဆိုတာကတော့ ကားမောင်းတဲ့သူတိုင်းလိုလိုနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးဖြစ်မှာပါ။ ကားအင်ဂျင်တုန်နေလို့ ပလက်စစ်ရမယ်၊ ပလက်လဲရမယ် အစရှိသဖြင့် ကားလောကသားတိုင်းလိုလို ကားမောင်းတဲ့သူတိုင်းလိုလိုကြားဖူးကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Spark Plugs တွေ မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် ကားအင်ဂျင်တုန်တာတစ်ခုတည်းလား တခြားဘာတွေရောဖြစ်နိုင်သေးလဲ၊ Spark Plugs တွေက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ သူ့မှာပါတဲ့ နံပါတ်တွေကရော ဘာတွေကို ရည်ညွှန်းသလဲ၊ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့် Spark Plugs တွေ အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သလဲ အစရှိတဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါ့မယ်။
ကျနော်တို့လက်ရှိကားလောကမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးမှ စွမ်းအင်ရရှိတဲ့ (Internal Combustion Engine) အင်ဂျင်တွေမှာ SI Engine (Spark Plug Ignition) နဲ့ CI Engine (Compression Ignition) ဆိုပြီး အင်ဂျင် ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်လို့ လူသိများတဲ့ ဓာတ်ဆီကို လောင်စာဆီအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်တွေမှာပဲ မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖို့အတွက် (Spark Plug Ignition) ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီဇယ်ကို အသုံးပြုတဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာတော့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖို့ ဖိကျစ်အားကိုပဲ အသုံးပြုပေါက်ကွဲစေတာမို့ Spark Plug မလိုအပ်ပါဘူး။
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တစ်လုံး မီးလောင်ပေါက်ကွဲ စွမ်းအင်ရရှိပုံက၊4Strokes ကားအင်ဂျင်ရဲ့ အဓိက အလုပ်လုပ်ပုံတွေဖြစ်တဲ့
Intake Stroke (လေကို ဆွဲသွင်းတဲ့ စတုတ်)
Compression Stroke (ဆွဲသွင်းထားတဲ့လေနဲ့ Injector ကနေ ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့ လောင်စာဆီကို ဖိကျစ်တဲ့ စတုတ်)
Power Stroke (ဖိကျစ်ထားတဲ့လေနဲ့ ဆီအရောကို Spark Plugs ကနေ မီးခတ်ပေးတဲ့ အခါ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ရတဲ့ စတုတ်)
Exhaust Stroke (မီးလောင်ထားပြီးသား မီးခိုးငွေ့တွေကို အိတ်ဇောကနေ ပြန်လည်စွန့်ထုတ်တဲ့ စတုတ်)
အစရှိတဲ့ ဆွဲ၊ ကျစ်၊ ကန်၊ ထုတ်4Strokes နဲ့ အင်ဂျင်တစ်လုံးလည်ပတ်နေတာပါ။
ဒီတော့ ဓာတ်ဆီကို အသုံးပြုနေတဲ့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖို့ Spark Plugs တွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါ။ Spark Plugs တွေကို ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ရဲ့ အသည်းနှလုံးလို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။
Spark Plugs တွေကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲ?
Spark Plug ဆိုတာက တကယ်တော့ Ignition Coil ဆိုတဲ့ Plug coil တွေကနေ ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက် Electric Spark တွေကို မီးလောင်ခန်းထဲကို အချိန်ကိုက် လွှတ်ပေးတဲ့ အရာဝတ္ထုပါ။ ဒီ Spark Plugs တွေရဲ့ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကတော့
Centre Electrode or Insulated Electrode (အတွင်းအလည်အူတိုင်)
Ground Electrode or Outer Electrode (အပြင်ငုတ် အကောက်)
Insulation Between Two Electrode (Electrode နှစ်ခုကြားက လျှပ်ကာပစ္စည်း)
အစရှိတဲ့ဟာတွေကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတာပါ။
ကျနော်တို့လက်ရှိကားလောကမှာတော့ Spark Plugs မှာပါတဲ့ Centre Electrode or Insulated Electrode + Ground Electrode (အတွင်းအလည်အူတိုင် နဲ့ အပြင်ငုတ်အကောက်) ကို မူတည်ပြီး Nickel Alloy နဲ့ ပြုလုပ်ထားရင် Copper Spark Plug ၊ Nickel Alloy နဲ့ ထိပ်က ငုတ် Tip လေးတွေမှာ Platinum ကိုသုံးထားတဲ့ Platinum Spark Plug တို့ နောက်ပြီး လူသိများလူကြိုက်များတဲ့ မာကျောတဲ့ Iridium သတ္တုအူတိုင်ကိုသုံးထားတဲ့ Iridium Spark Plug (အပ်ချွန်) အစရှိတဲ့ Plug တွေကို အသုံးများကြပါတယ်။
Spark Plug ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ?
Spark Plugs ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိသလဲဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ Denso ၊ NGK ၊ Bosch ငုတ်တို၊ ငုတ်ရှည် ဘာညာအစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်လို့ ထင်ကြပါမယ်။ တကယ်တော့ Spark Plug က အမျိုးအစားခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးကတော့ Cold Spark Plug နဲ့ Hot Spark Plug ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။
Cold Spark Plug နဲ့ Hot Spark Plug ဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုရင်တော့
Electrode နှစ်ခုကြားက Insulator က တိုမယ်၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခန်းထဲ မီးလောင်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ Gas တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းမယ်၊ နောက်ပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတဲ့အခါ Spark Plug မှာရှိနေတဲ့ အပူချိန်ကို မြန်မြန် စွန့်ထုတ်နိုင်မယ်။ Spark Plug ရဲ့ ထိပ်တွေဟာ မြန်မြန်မပူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီ အမျိုးအစားကို Cold Spark Plug Type လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Electrode နှစ်ခုကြားက Insulator ကရှည်မယ်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲခန်းထဲက မီးလောင်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ Gas တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုများမယ်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးသွားတဲ့အခါ Spark Plug မှာရှိတဲ့ အပူချိန်ကို မြန်မြန် မစွန့်ထုတ်နိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး Spark Plug တွေရဲ့ မီးပွားထွက်စေတဲ့ ထိပ်တွေဟာ မြန်မြန်အပူချိန် မြင့်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ Spark Plug အမျိုးအစားကို Hot Spark Plug လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Cold Spark Plug နဲ့ Hot Spark Plug နှစ်ခုကြားက အဓိက ကွာခြားချက်က Heat Range လို့ ခေါ်တဲ့ အပူချိန် ခြားနားချက်က အဓိကအချက်တခုပါပဲ။ ဘယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစား ဘယ်လောက်လည်ပတ်မယ်၊ ဝန်ရုန်းအား များသလား/နည်းသလား အစရှိတာတွေကို တွက်ချက်ပြီးမှ Cold Type လား Hot Type လား၊ နောက် Heat Range ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာတွေကို ကားအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ကားအင်ဂျင်မှာသုံးတဲ့ Spark Plug မှာမဆို ဘယ် Brand Spark Plug ကိုသုံးသုံး Spark Plug ရဲ့ ကိုယ်ထည် Body ပေါ်မှာ ကုဒ်နံပါတ်လေးတွေပါလာပါတယ်။
Spark Plug ပေါ်မှာပါတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်တွေက ဘာတွေလဲ?
Spark Plug ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ကုဒ်တွေကတော့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအမျိုးမျိုး၊ ကိန်းဂဏန်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်
Honda Fit ကားလေးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ GD1 တို့ GD2 တို့လို အင်ဂျင်အမျိုးအစားတွေမှာ သုံးတဲ့ Spark Plug တွေမှာ Denso အမျိုးအစားဆိုရင် (K20PR-U11) ဆိုပြီးရေးထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီမှာပါတဲ့အက္ခရာတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခြင်းဆီက
K=Thread Diameter (အရစ် Diameter ) နဲ့ Hex Size (14*16)
20 = Heat Range
P = Central Electrode နဲ့ Thread ကြားအကွာအဝေး
R = Register Type
-U= Ground Electrode ရဲ့ပုံစံ (U ပုံစံ)
11= Ground Electrode နဲ့ Centre Electrode ကြားက Gap အကွာအဝေး 1.1 mm ဆိုပြီး တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Denso Spark Plug တွေရဲ့ Heat Range ကို4to 35 ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ NGK အတွက်ကတော့2to 11 အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး Denso Spark Plug Heat Range 20 က NGK Spark Plug ရဲ့6နဲ့ညီမျှပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံအားဖြင့် တူညီတဲ့ Heat Range နဲ့ Specification ရှိတဲ့ Spark Plug တွေကို ရွေးချယ်အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် GE6 အတွက် Denso အမျိုးအစား DK20PR-D13 ကို သုံးစွဲနိုင်သလို Iridium Tough အမျိုးအစား VFK20 F အမျိုးအစား Spark Plug ကိုလည်း အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Spark Plugs တွေ မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်?
ဆီရယ်၊ လေရယ်၊ မီးရယ် အချိုးကျကျမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးမှ လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်ရရှိတဲ့ အင်ဂျင်တစ်လုံးမှာ အဓိက အရေးပါတဲ့ Spark Plug တွေ မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်
အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေက EFI (Electronic Fuel Injection) စနစ်တွေမှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေရယ် အဲဒီကထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောအငွေ့တွေရယ်ကို အာရုံခံပြီး ဆီနဲ့လေကို အချိုးကျ ပြန်လည်တွက်ချက်ပေးရတဲ့ စနစ်တွေပါဝင်လာတာမို့ Spark Plug ကနေ ထွက်တဲ့ Sparking မီးပွားတွေလိုအပ်သလောက် မဖြစ်ပေါ်လာဘူးဆိုရင် အာရုံခံစနစ်တွေလွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကားရဲ့ ကွန်ပျူတာဘောက်လို့ခေါ်တဲ့ ECU ကနေမလိုအပ်ဘဲ ဆီပိုကျွေးပေးတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ကားဆီပိုစားလာတတ်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ပြောရရင် မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေလွဲကုန်မယ်။ ဆီနဲ့လေကိုဖိသိပ်ပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲရတော့မယ့် အချိန်မှာ Spark Plug ကနေ မီးမထွက်နိုင်တာမျိုး၊ မီးအထွက်နည်းတာမျိုးတွေကြောင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် အပြည့်အ၀မဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘဲ Cylinder ထဲမှာ Misfire ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။
Engine Check Light ပေါ်လာမယ်
ဒါကလည်း အပေါ်က အချက်ကြောင့်ပါပဲ အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းထဲမှာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်စဉ်တွေ ကောင်းကောင်းမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးဆိုရင် Cylinder ထဲ Misfire ဖြစ်ပေါ်နေတာကို ECU ကနေ အာရုံခံပြီး Engine Check မီးလင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကားရပ်ထားတာကြာလို့ နှိုးတဲ့အချိန်၊ ညသိပ်ထားပြီး မနက်ပိုင်း နှိုးတဲ့အချိန်တွေမှာ နှိုးရခက်နေတာမျိုးကလည်း Spark Plug တွေမကောင်းလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Idle (Slow) မငြိမ်ခြင်း
ကားစက်နှိုးထားပြီး အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ Idle မငြိမ်ဘဲ RPM တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကလည်း ဆီလေမီးပေါက်ကွဲမှု မမှန်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်တာမို့၊ Spark Plug တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။
ကားမောင်းနေရင် ကားချင်းကျော်တက်တော့မယ့်အချိန် Accelerator နင်းပေမဲ့ ကားကအဆွဲအရုန်းတက်မလာဘဲ တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေတာကလည်း Spark Plug တွေမကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားအရှိန်တင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဆီအချိုး၊ လေအချိုးတိုးမြှင့်လိုက်ပေမဲ့ မီးပွားခတ်ပေးရမယ့် Spark Plug တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် ကားကဒီလိုမျိုးတုံ့ဆိုင်းတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက Sparking Plug တွေမကောင်းဘူးဆိုရင် အဖြစ်များဆုံးသော ရောဂါလက္ခဏာတွေပါ။
ဘာကြောင့် Spark Plugs တွေ အပျက်စီးမြန်ရတာလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် သာမာန် Spark Plugs တွေရဲ့သက်တမ်းက ကီလိုမီတာ 15,000 Km ကနေ 35,000 Km လောက်ထိ သက်တမ်းခံပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ Spark Plugs တွေကတော့ 100,000 Km လောက်ထိ ခံတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့်လည်း Spark Plugs တွေ သက်တမ်းမကုန်ခင် ပျက်စီးသွားတတ်ကြပါတယ်။
မီးလောင်ခန်းထဲ အင်ဂျင်ဝိုင် ယိုစိမ့်ဝင်တာ
ကားအင်ဂျင်တွေက သက်တမ်းကြာမြင့်တာရယ်၊ နောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းတာတွေကြောင့် အင်ဂျင်မီးလောင်ခန်းထဲ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေယိုစိမ့်ဝင်တာကြောင့် Spark Plug တွေ အလွယ်တကူ အလျင်အမြန် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Spark Plug Oil Seal တွေကနေယိုစိမ့်တာ၊ Valve Oil Seal တွေက ယိုစိမ့်တာ။
ဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ 92 ၊ 95 အစရှိတဲ့ ဆီတွေရဲ့ အရည်အသွေးမပြည့်မီတာတွေကြောင့်လည်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကောင်းမွန်စွာ မဖြစ်စေနိုင်ဘဲ Spark Plugs တွေကို မြန်မြန်ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ Fuel Injectors တွေမကောင်းရင်လည်း Spark Plugs တွေကို သက်တမ်းတိုစေပါတယ်။
Air Filter လို့ခေါ်တဲ့ လေစစ်မသန့်ရှင်းရင်လည်း Spark Plugs တွေကို သက်တမ်းမကုန်ခင်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မီးလောင်ခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာမယ့် လေဟာအညစ်အကြေးနည်းနိုင်သမျှ နည်းပြီး သန့်ရှင်းမှသာလျှင် မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကောင်းမွန်စွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အညစ်အကြေးများပါက မသန့်ရှင်းတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေက Spark Plugs တွေနဲ့ Piston ရဲ့ ထိပ်မှာ Carbon အညစ်အကြေးတွေ အဖြစ်ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် Spark Plugs တွေ မြန်မြန်ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား မတူညီတဲ့ Spark Plugs တွေအသုံးပြုတာ
များသောအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့ ကားလောကမှာ Spark Plugs တွေရဲ့ Heat Range တွေ Gap အကွာအဝေးတွေကို သတိမထားဘဲ ပုံစံတူတွေကိုအသုံးပြုတာကလည်း Spark Plugs တွေကို အလွယ်တကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလို Heat Range မတူညီတဲ့ Spark Plugs တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကွာခြားတာကြောင့်ရယ်၊ Gap မတူညီတဲ့အတွက် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်အတွက်အတိအကျလိုအပ်တဲ့ မီးပွားတွေထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်ရယ် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်တွေ ပျက်ယွင်းစေပြီး ဆီပေးများတာ၊ လေပေးများတွေကနေတစ်ဆင့် Over Heating တွေဖြစ်စေပြီး နောက်ဆုံး Spark Plugs တွေ သက်တမ်းတိုရပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် Spark Plugs တွေ မကောင်းတော့လို့ အသစ်လဲတော့မယ်ဆိုရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ Companies တွေကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ Heat Range တွေ Gap တွေ တူညီတဲ့ အမျိုးအစားတွေကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုမှ သင့်ကားအင်ဂျင်ရဲ့ Performance အပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက Spark Plugs နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတို့အတွက် Spark Plug နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရယ်၊ ကြိုတင်သိထားသင့်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေရယ်၊ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန် အခြေခံအချက်တွေရယ် ဖြစ်ပါတယ်။ Spark Plug ဆိုတာ ပုံစံကြည့်ရင် ရိုးရှင်းလှတဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့ များပြားလှတဲ့ အင်ဂျင်တွေ၊ မျိုးတူမူကွဲ၊ မူတူမျိုးကွဲ Spark Plug ပေါင်းများစွာ သိန်းသန်းနဲ့ချီရှိတာမို့ မတူညီတဲ့ သဘောသဘာဝ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီဆောင်းပါးက Spark Plug နဲ့ပတ်သက်ရင် အကုန်ပြည့်စုံမှမဟုတ်ပေမဲ့ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေအတွက် Spark Plug နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံဗဟုသုတ များစွာတော့ရရှိနိုင်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတကြွယ်ဝကြပါစေ။
All-Wheel Drive နဲ့ 4-Wheel Drive တို့ ဘာတွေကွာခြားသလဲ